Upcoming event at UNSW on books in Myanmar There is now more opportunities than ever before to promote education and knowledge through public libraries in Myanmar. Yet because it has been closed for so long to the outside world, Myanmar is facing numerous challenges ranging from the lack of infrastructure to human resource capacity. This presentation will focus on recent trends in the publication of books published in Myanmar in both English and Burmese. The presentation will cover reading promotion efforts by two of the main local NGOs; Myanmar Book Aid and Preservation Foundation and the Daw Khin Kyi Foundation which is chaired by Ms Aung San Suu Kyi. Bio of Speaker: Dr Thant Thaw Kaung is CEO and founder of Myanmar's leading book importer and distributor, the Myanmar Book Centre. He also founded and is Executive Director of the Myanmar Book Aid and Preservation Foundation. This NGO has so far donated over one million books to over 900 libraries in Myanmar as well as preser
[pdf version available here ] ဦးကိုနီသို့ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ဂုဏ်ပြုတမ်းချင်း မလီဆာ ခရောက်ခ်ျ (Melissa Crouch) ၊ ဧည့်ဆောင်းပါးရှင်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက်၊ ၂၀၁၇ခုနှစ် တနင်္ဂနွေနေ့က ထင်ရှားသည့် မွတ်စလင်မ် ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥပဒေအကြံပေး ဦးကိုနီသည် လုပ်ကြံမှုလို့ ယူဆရတဲ့ သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ အသေပစ်သတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ မလီဆာ ခရောက်ခ်ျ (Melissa Crouch) က သူ့ဘဝ တစ်စေ့တစ်စောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသိစိတ်ရှိသော ဥပဒေရေးရာ အသံတစ်ခု၏ အမွေအနှစ်အကြောင်း ထင်ဟပ်တင်ပြထားပါသည်။ ဤရက်သတ္တပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လူတွေဟာ ဖြစ်လာတော့မယ့် တိုင်းပြည်အမျိုးအစားကို မျက်မှောက်ပြု ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ တွန်းအားပေးခံကြရပါပြီ။ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉မှာ ထင်ရှားတဲ့ ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥပဒေအကြံပေးလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးကိုနီဟာ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဦးကိုနီဟာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးဖေမြင့်နဲ့အတူ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ခရီးကနေ ပြန်လာခဲ့တာပါ။ ဦးကိုနီဟာ ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ရပ်ခံလှုံ့ဆော်ရာမှာ ပွင်းပွင်းလင်းလင်း ပြောတတ်ပြီး၊